UN: Waxaa jiro caqabado kala dhantaalayo dadaallada dowladda Soomaaliya - BBC News Somali
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in Soomaaliya ay hormar ka samaynayso dhanka dhismaha dawlad awood leh oo shaqaynaysa.
Balse waxa uu sheegay in dawladdu ay wax ka qabato arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin: "Dhibaatada argagixisada, iska hor imaadyada hubaysan, dagganaansho la'aanta siyaasadeed iyo musuqmaasuqa."
Antonio Guterres ayaa ku sheegay warbixin uu siiyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay in caqabadahaasi ay "kala dhantaalayaan dadaallada ay dawladdu waddo" iyo in ay "hor istaagayaan hormarka socda".
Soddon sano oo dagaal sokeeya ah, weerraro argagixiso iyo macluul kaddib, Soomaaliya waxay sannadkii 2012-kii yagleeshay dawlad shaqaynaysa oo aan ku meel gaar ahayn, wixii intaas ka dambeeyey waxay ka shaqaynaysay dib u dhiska dalka.
Laakiin Guterres ayaa yidhi "xaaladda ammaanku ma ahan mid cago badan ku taagan.
Mintidiinta Alshabaab, oo ka mid ah ururka al-Qaacida, ayaa sii wada "weerarrada ka dhanka ah xarumaha dawladda, mas'uuliyiinta, laamaha ammaanka iyo sidoo kale maqaayado iyo hoteello caan ah," ayuu yidhi.
Guterres ayaa sheegay in bilihii March iyo April ay "kordheen weerarrada ka dhacay Muqdisho, halkaas oo qaraxyo joogto ah ay ka dhacaan". Bishii March, ayuu sheegay, in 77 weerar ay ka dhaceen guud ahaan dalka, waana weerarraddii ugu badnaa ee bil gudaheed dhaca tan iyo sanadkii 2016-kii.
Guterres ayaa intaas ku daray in "weerarrad hoobiyeyaasha ay soo kordheen, arrintaas oo muujinaysa in Alshabaab ay awood u yeesheen in ay beegsadeen bartilmaameedyo istiraatiiji ah."
"Kooxdaha mintidiinta ah ayaa sii wada in ay weerraro qaadaan ayagoo adeegsanaya gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey", ayuu hadalkiisa ku daray.
Xoghayaha Guud ayaa intaas raaciyey, in muddada warbixintan la aruurinayey ay kordheen hawlgallada ammaanka lagu sugayo. "Duqaymo badan oo dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday saldhigyo lagu tababaro maleeshiyaadka alshabaab, arrintaas ayaana hoos u dhigtay awoodda hawlgalladooda iyo dhaqdhaqaaqooda labadaba", ayuu yiri.
Guterres ayaa sheegay in nabadgalyo darrada ay wehliso in qaar badan oo ka mid ah dadweyanah soomaaliya ay haysato saboolnimo baahsan iyo cunto la'aan.
Waxa uu soo qaatay in Bangiga Aduunku uu ku sheegay qiimayn lagu sameeyey heerka saboolnimada in 77% boqolkiiba, dadweynaha Soomaaliya ay ku nool yihiin wax ka hooseeya $1.90 maalintiiba.
"Saboolnimada ayaa aad ugu baahday deegaannada miyiga ah iyo dadka ku barakacay gudaha dalka," ayuu yidhi Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobeey.
"ku dhawaad 90% boqolkiiba, qoysaska Soomaalidu ma helaan adeegyada aas aasiga ah, sida waxbarasho, biyo iyo caafimaad".
Qaramada Midoobay ayaa Isniintii ku baaqday in $710 million oo dollar, lagu caawiyo 4.5 million oo qof oo Soomaali ah oo abaarta ay saamaysay.